फेसबुकले यी नेपाली युवालाई दियो रु. १२ लाखको पुरस्कार, किन पाए यति ठुलो रकम ! (भिडियो) – Halkhabar kura
९ पुष २०७७, बिहीबार ११:४८
फेसबुकले यी नेपाली युवालाई दियो रु. १२ लाखको पुरस्कार, किन पाए यति ठुलो रकम ! (भिडियो)
नेपाली इथिकल ह्याकर तथा साइबर सुरक्षा अनुसन्धानकर्ता सौगात पोखरेलले फेसबुकको बग अर्थात कमजोरी पत्ता लगाएर कम्तिमा पौने १२ लाख रुपैयाँ पुरस्कार हात पार्नुभएको छ । यसअघि इन्स्टाग्रामको बग पत्ता लगाउनुभएको उहाँले यस पटक फेसबुकको कमजोरी उजागर गर्नुभएको हो ।
फेसबुकको बग पत्ता लगाएवापत पोखरेलले १० हजार अमेरिकी डलर अर्थात ११ लाख ५७ हजार ३०० रुपैयाँ बराबरको रिवार्ड अर्थात सम्मान पाउनुभएको छ । यसअघि इन्स्टाग्रामको कमजोरी पत्ता लगाए वापत उहाँले ६ हजार अमेरिकी डलर पुरस्कार हात पार्नुभएको थियो ।
त्यतिखेर उहाँले इन्स्टाग्राममा लामो समयअघि नै प्रयोगकर्ताले डिलिट गरेको फोटो र डाइरेक्ट म्यासेज (डीएम) कम्पनीको सर्भरमै रहने गरेको तथ्य पत्ता लगाउनुभएको थियो । उहाँले ट्वीटरमार्फत आफ्ना लागि एकदमै विशेष दिन रहेको भन्दै खुशी साट्नुभएको छ । जसमा उहाँले पाँच अंक डलर बाउन्टी रिवार्ड प्राप्त गरेको समेत खुलाउनुभएको छ ।
Previous टिकटक बनाउन पुलमा झुण्डिएका युवा खसेर गम्भीर घाइते (भिडियोसहित)
Next राजा फर्काउने अभियानमा मौसमीदेखि राजारामसहित यी कलाकारहरु उर्लिएपछि (भिडियोसहित)